Studentsmụ akwụkwọ mepụtara kit na Arduino iji mepụta oche nkwagharị eletrik | Akụrụngwa n'efu
Mụ akwụkwọ mepụtara kit na Arduino iji mepụta oche nkwagharị eletrik
Ruo ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ ndị otu na ndị na-eme ọrụ nọ na-enyocha ma na-emepe emepe ka esi emepụta oche eletriki na Akụrụngwa Free ka ngwa a, maka ọtụtụ dị mkpa, bụ ihe dị mfe inweta ma ọ bụghị ọnụ dị ka ọ na-eme ugbu a.
Ìgwè ụmụ akwụkwọ ahụ kpọrọ steampunk1577 jisiri ike mepụta otu kit na Arduino nke na-agbanwe oche nkwagharị nkịtị na oche eletrik eletrik, ihe bara ezigbo uru maka ndị na-enweghị ike ịnweta ụdị ngwa a.
Otu umu akwukwo meputara ihe nwere ike itinye ya na oche oche o bula ma gbanwee ya n'oche eletrik. Ihe niile maka 500 dollar, ọnụahịa dị ọnụ ala karịa ezigbo oche ọlụsị eletrik, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume dị oke ọnụ karịa ma ọ bụrụ na anyị ji aka anyị rụọ ya.
A na-ebipụta motọ dị na ngwa a iji mepụta oche ndị ọkụ eletrik dị mfe
Ngwa a dabere na ya efere Arduino UNO nke na-achịkwa ma na-ewepụta usoro ngagharị anyị na-enye. Mgbe ahụ, Arduino UNO Ekele maka ike batrị ahụ, ọ na-eme ka moto ndị e biri ebi nke anyị na-etinye na oche nkwagharị. A na-ebipụta igwe ndị a dị ka ihe ndị ọzọ Akụrụngwa akụrụngwa na ngwaọrụ ndị mejupụtara ngwa a iche iche maka ndị ka nwee aka ma chọọ iwulite onwe ha. Enwere ike ịnweta kit na ozi niile gbasara ngwa Arduino a site na Steampunk1577 ukara website.
Otu uru ma ọ bụ ihe dị mma nke akụrụngwa bụ Free ngwa ya kwa ụbọchị ma ọ bụ ihe ndị dị mkpa nke nwere ọnụahịa dị oke elu ma enwere ike wuru ha maka ụgwọ dị ala. Oche nkwagharị igwe eletriki a bụ ezigbo ihe atụ mana enwere ndị ọzọ dịka igwe ntanetị maka mmegharị ihu, nke e biri ebi, wdg ... Ihe na-enyere ọtụtụ mmadụ aka, ọbụlagodi na anyị amaghị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Mụ akwụkwọ mepụtara kit na Arduino iji mepụta oche nkwagharị eletrik
Otu na ebe ị nwere ike ịzụta. Ọ kwesịrị na m ga-arụnye ya n'onwe m? Enwere ike itinye ya na oche oche oche mpịachi?
M bi na Orense, SPAIN.
Zaghachi Alfredo Rodriguez Couto
RaspiReader, onye na-agụ mkpịsị aka na-eji Raspberry Pi 3